नेपालमा पनि क-ल गर्लको बिगबिगी, यि मुख्य शहरमा छ यस्तो अखडा – Enepali Samchar
नेपालमा पनि क-ल गर्लको बिगबिगी, यि मुख्य शहरमा छ यस्तो अखडा
April 6, 2021 adminLeaveaComment on नेपालमा पनि क-ल गर्लको बिगबिगी, यि मुख्य शहरमा छ यस्तो अखडा
e nepaalisamchaar//रवि कार्की (नाम परिवर्तन) काठमाडौंको एउटा फ्ल्याटमा पुगे । खानाका परिकारदेखि मापसेसम्मको राम्रो व्यवस्था भएको फ्ल्याटमा दुईजना युवती थिए ।
धनगढीबाट काठमाडौं आएका बेला काम सकेर म-स्ती मुडमा रहेका रविले एक हप्तासम्म प्रयोग गरेको ट्याक्सीमार्फत त्यो फ्ल्याटको ढोका ढकढकाउने अवसर पाए । ‘लन्डनमा त व्यावसायीक रूपमा नै यस्ता ठेगाना पाइन्छन्, काठमाडौं लगायतका ठाउँमा पनि सुरु भएको रहेछ ।’
उनको डिल भयो– ५ हजार रूपैंया, ८ घन्टाको समय । खाना, खाजा र दुई बोतल मापसे पनि । साथमा चाहेको सबै पनि । केही समय लन्डन समेत बसेका उनले नेपालमा सस्तो र राम्रो सुविधा पाएको महसुस गरें ।
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्….
उनी भन्छन्,‘लन्डनमा त व्यावसायीक रूपमा नै यस्ता ठेगाना पाइन्छन्, काठमाडौं लगायतका ठाउँमा पनि सुरु भएको रहेछ ।’ रविले हरेक पटकको काठमाडौं बसाईलाई सु-खमय बनाउने सजिलो माध्यम पनि भेटेका छन् ।
रविमात्र होइन जीवन बुढाथोकी (नाम परिवर्तन) लाई जतिबेला श-रीरलाई आ-नन्द लिने मन हुन्छ इन्टरनेट साइट खोतल्न थाल्छन् ।
कल गर्ल सम्बन्धी व्यावसायीक साइटमा रहेका ठेगानाका नम्बर र युवतीसँग स-म्पर्क गर्छन् । केही समयमा नै डिलअनुसारको सेवा लिने गरेका छन् । खासगरी विद्यार्थी, रोजगारी गरिरहेका युवतीहरूले छिटो आम्दानीका लागि क-र्ल ग-र्लको पेशालाई अपनाउन थाले
रेडलाइट एरिया नभए पनि नेपालका विभिन्न सहरमा क-ल ग-र्लको संख्या भुसमा आगो हुर्किए जसरी बढेको छ । खासगरी विद्यार्थी, रोजगारी गरिरहेका युवतीहरूले छिटो आम्दानीका लागि कर्ल गर्लको पेशालाई अपनाउन थालेका छन् । यसको यकिन तथ्यांकन नभए पनि विभिन्न सहरमा युवतीहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ ।
कल गर्ल होस्टेल, फ्ल्याटमा बस्ने गरेका छन् । उनीहरूले सेवा ग्राहीलाई सुरक्षित स्थान अथवा आफु बसेको फ्ल्याटमै पनि सेवा दिने
कतिपय कल गर्ल आफ्ना ग्राहकको मर्जीअनुसार विभिन्न ठाउँमा ‘लङ ड्राइभ’मा समेत जाने गरेका छन् । इन्टरनेट एउटा माध्यम भयो, अर्को क्लव, डान्स रेष्टुरेन्ट र कतिपय डिस्कोमा भेट हुने गरेको पाइन्थ्यो । अहिले ती स्थान बन्द रहेकाले धेरै इन्टरनेट वा ट्याक्सी ड्राइभरको स-म्पर्क सुत्रबाट फैलिरहेको छ ।
नेपालमा भने ट्याक्सी, बार, क्लवलगायतका ठाउँको स-म्पर्कका आधारमा कल गर्लले व्यावसाय गर्दै आएका छन्
के हो कल गर्ल ? कल गर्ल भनेको बाटोमा हिँड्ने ‘श-रीरलाई सु-ख दिन सबै कसरत गरिदिने’ हुन् । उनीहरूले आफ्नो पेशा र व्यावसायलाई आम मानिसलाई प्रस्टसँग खुलाएका हुँदैनन् ।
उनीहरू कुनै एजेन्सीसँग आवद्ध हुने गरेका छन् । क-ल ग-र्लले म्यागेजिन र इन्टरनेटमा आफ्नो विज्ञापन पनि गरेका हुन्छन् । उनीहरूको विज्ञापनलाई एजेन्सीहरूले प्रमोशन गरेका हुन्छन् ।
कतिपय युवा अवस्थाका लागि बनाइने फिल्ममा काम गर्नेहरु पनि क-ल ग-र्लका रूपमा सेवा दिइरहेका हुन्छन् । कतिपय कलगर्लका आफ्ना वेभसाइट पनि हुने गरेका छन् ।
नेपालमा भने ट्याक्सी, बार, क्लवलगायतका ठाउँको सम्प-र्कका आधारमा कल गर्लले व्यावसाय गर्दै आएका छन् । कानुनले ब-र्जित गरेका कारणले वेभसाइट, विज्ञापनलगायत हुने गरेको छैन ।
फलानो होटलमा छापा मारेर प्रहरीले यति जोडीलाई आपत्तिजनक हालतमा प-क्राउ गर्यो भन्ने समाचारहरूमा अब कुनै नवीनता छैन। देशका मुख्य शहर र शहरोन्मुख गाउँहरूमा खुलेआम चि-त्तसुखको खरिदबिक्री भइरहेको छ।
कल गर्लहरूले रेडलाइट एरियाको माग गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो। पूर्वका प्रमुख शहर र बजारमा सर्वत्र स्थापना भइरहेका छन्, गल गर्ल स्टेसनहरू। दिनप्रतिदिन बदिलँदो जीवनशैली र आयस्तरसँगै ग-ल ग-र्ल स्टेसनहरू बनिरहेका छन्।
६ दिनमा ५ करोडले हेरेको ललितपुरको भाइरल डरलाग्दो अचम्मको हल्लिने ठाउ (भिडियो सहित हेर्नुहोस् )
बैशाख महिना यि ४ राशि धनि, भाग्यसाली बन्दै (हेर्नुहोस भिडियो सहित )
के तपाईंसंग यी पुरानो नोट छ ? तपाईं यसरी मालामाल बन्न सक्नुहुनेछ ! ( हेर्नुहोस यो भिडियोमा सम्पुर्ण जानकारी सहित)
सपनीमा सेतो सर्प देख्दा अत्यन्तै शुभ मिल्छ यस्तो लाभ :ॐ लेखेर एक Share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ।
एक अद्भुत यात्रा गुम्बाडाँडादेखि पाथीभरासम्म